April 3, 2021 - ApannPyay Media
April 3, 2021 by ApannPyay Media
နိုကိုဥ (သကြားမုန်လာဥ ) နိုကိုဥ ဖျော်ရည် Beet root တစ်ဥ၊မုန်လာဥနီတစ်ဥ၊ ဂျင်းလက်တဆစ်၊ပန်းသီးစိမ်းတစ်လုံး၊လီမွန်တစ်ခြမ်းနဲ့ ရေ ၃၀၀ CCနဲ့ ဖျော်စပ်ထဲရောထည့်ကာ ဖျော်သောက်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သွေးကျစေတယ်လို့ နာမည်ကြီးလှပါတယ်။ အမြင်အာရုံကြည်လင်စေမဲ့ နိုကိုဥ အသက်အရွယ်ရလာပြီဆိုရင် အမွငျအာရုံတှေေ၀ဝါးလာတတျတာသဘာဝပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာဆို တီဗီ ဂိမ်း ဖေ့ဘုတ်တွေ အသုံးများလာကြလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပါဝါမျက်မှန်တွေ တပ်နေကြပါတယ်။ နိုကိုဥကတော့ ငယ်စဉ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်အရွယ်ရလာရင်ဖြစ်ဖြစ် အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသည်းအဆီဖုံးတာကိုလည်း သက်သာစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် တခြားကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ နိုကိုဥကို သုပ်စားရအောင် နိုကိုဥ ၂ ဥ (သို့) ၃ ဥ ကြက်သွန်နီ ၂ လုံး သံလွင်ဆီ အသန့် ရှလကာရည် … Read more
ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အစားအစာများကို စားပြီးပါက ပြန်လည်ဖြေပေးနိုင်သော အိမ်တွင်းနည်းများ
ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အစားအစာများကို စားပြီးပါက ပြန်လည်ဖြေပေးနိုင်သော အိမ်တွင်းနည်းများ ဝက်ဆားနယ်ခြောက် ၊ ဝက်အူချောင်း ၊ ငါးခြောက် ၏အဆိပ်ဖြေဆေးက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဆားနယ်ခြောက် ၊ ဝက်အူချောင်း ၊bacon ၊ အစားအစာများက စားကောင်းတဲ့အပြင် အချိန်ကြာရှည်စွာ အထားခံနိင်တာမို့လုတိုင်းနှစ်သက်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လွန်ကဲသောဆားဒြပ်ပါဝင်ပြီး အသားကို ကြာရှည် ဆားနယ်သိပ်ရတာကြောင့် နိုက်ထရိုစမင်း Nitrosamine ကိုဖြစ်စေပြီးလုခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ မှာ ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့Dimethylnitrosamine ဒြပ် အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ် ။ အဆိပ်ဖြေဆေးက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းက ဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေသောဒြပ်တွေကို ပျက်ပြားစေပါတယ် ။ နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကုပြုနိင်ပါတယ် ။ ငါးခြောက် ၊ဝက်ဆားနယ်ခြောက်ဝက်ပေါင်ခြောက် ပေါင်း (သို့) ချက်စားတဲ့အခါ ရှာလကာရည် (သို့) သံပရာရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကျက်အောင်ချက်ခြင်းဖြင့်နိုက်ထရိုစမင်း … Read more
စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ စီးပွားကျဆင်းနေပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလား ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါ အားလုံးအဆင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေးအဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား။ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေလား သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ဘဝမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီလား စိတ်မပူပါနဲ့ မဟာသမယသုတ်ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ မဟာသမယသုတ်ပ ရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုစ ပူဇော်ကာစမှာ အလွတ်ရစရာမလိုပါဘူး စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပူဇော်တတ်ရင်ပဲ ရနေပါပြီ စပြီးပူဇော်ကြည့်ယုံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်အနေဘယ်လောက်အေးချမ်း လာတယ်ဆိုတာသိလာရပါမယ်။ ပူဇော်တဲ့သက်တမ်းရလာတာနဲ့အမျှ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အဆင်ပြေမှုတွေ တိုးတတ်မှုတွေ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရလာပါလိမ့်မယ်။ လောကီချမ်းသာတင်ပဲလား မဟုတ်သေးပါဘူးနော် လောကုတ္တရာအတွက်ကြီးမြတ်သောအထောက်အပံ့ကောင်းတစ် ခုကိုမိမိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့လာရပါမယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာပါမယ် ဘဝမှာကောင်းမြတ်သောမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ရှင်သန်လာပါမယ် ဘဝတိုးတတ်အောင်မြင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တာ မဟာသမယသုတ်ပါပဲ။ ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်ကင်းစေနိုင်တာလည်း မဟာ သမယသုတ်တော်ပါပဲ လောကအလယ်မှာအထက်တန်းကျကျ မျက်နှာပန်းလှလှ လောကီ လောကုတ္တရာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်။ … Read more
မိန်းကလေးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့အစပျိုးလက္ခဏာများ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံက အမျိုးသားတွေနဲ့ လုံးဝကိုခြားနားနေပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာသာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ ရက်ရှည်လများအစပျိုးပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ ရောဂါအစပြုနေချိန်မှာ သတိထားမိခဲ့ရင်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ ရောဂါအစပျိုးလက္ခဏာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဗိုက်ပူနေခြင်း မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းတွေသေချာမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဗိုက်ပူလာတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်မှာအဆီစုပြီး ဗိုက်ပူတာက ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပေမယ့် အစားအများကြီးစားထားသလိုမျိုး ဗိုက်ဖောင်းပြီးပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်က အမြဲလိုလိုတင်းပြီး ပူနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရင်သားကင်ဆာ ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်ကင်ဆာအစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၂) မေးစေ့နားတဝိုက်ဝက်ခြံတွေထွက်ခြင်း ဝက်ခြံထွက်တာကလည်း ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့အရာမို့ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မေးစေ့နားတဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေအမြဲလိုလိုထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟော်မုန်းတွေ အလွန်အမင်းကမောက်ကမဖြစ်နေပါပြီ။ သင့်မေးစေ့နားတဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေအမြဲထွက်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြသစစ်ဆေးဖို့လိုနေပါပြီ။ (၃) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ … Read more
အရေးကြီးပါတယ် ဒီအချိန် လက်ထဲရှိတဲ့ ငွေကို တန်ဘိုးထားပါ မြန် မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု ပမာဏက ၂၀၂ဝခုနှစ် ၆ လပိုင်းကနေစပြီး ၁၂ လပိုင်းအတွင်းမှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ အလွန်သိသာလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ ငွေကို အသဲအသန်လို လာကြပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ်ချေးငွေ မလွယ်ကူတဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွက်တော့ ဒီပြသနာကို ‌‌ဖြေရှင်းဖို့ လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်း ၂ ခုပဲရှိပါတယ် လုပ်ငန်းတွေကို ပိတ်သိမ်းမလား၊ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုခွဲရောင်းချပြီး လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လည်ပတ်မလား လုပ်ငန်းတွေ လည်ပတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ ရှိထားတဲ့ ရွှေ၊ ကား၊ အိမ် စတဲ့ ၃ မျိုးကို ထုခွဲရောင်းချရပါမယ် ရွှေ ။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး နာရီပိုင်းအတွင်း ငွေဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပါ။ … Read more
မြေပဲဆံစားပေးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအံ့မခမ်းကောင်းကျိုးများ မြေပဲက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် ပေါပေါများများတွေ့နိုင်တဲ့ အခွံမာအစေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ နေ့စဉ်အစား အသောက်တွေမှာ အနံ့အရသာကောင်းလှတဲ့ မြေပဲဆီက မပါမပြီးတဲ့ စားသုံးဆီပဲ မဟုတ်ပါလား။ မြန်မာတွေဟာ စားသုံးဆီအပြင် မြေပဲကို အချိုတွေနဲ့ရောစပ်ပြီး မုန်းပဲသရေစာ အဖြစ်လုပ်စားကြပါသေးတယ်။ တကယ်တော့မြေပဲဟာ ဓါတ်မတည့်သူတစ်ချို့ကလွဲရင် ကျန်စားသုံးသူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်ပါတယ် (၁) စွမ်းအင်တွေရပါတယ်။ မြေပဲမှာ စွမ်းအင်အပြင် ဗီတာမင်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်၊မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ဇင့် ၊ သံဓါတ်စတဲ့သတ္တု ဓါတ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အားကစားသမားတွေအတွက် အထူး သင့်တော်ပါတယ်။ ( ၂)ဦးနှောက်အာရုံကြောတွေကို ကောင်းစေတယ်။ မြေပဲမှာပါတဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း Resveratrol က နာဗ်ကြောစနစ်ကို အားကောင်းစေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးပိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့အယ်လဇိုင်းမားရောဂါမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၃)အရေပြားကို ချောမွေ့လှပစေပါတယ်။ မြေပဲမှာ အစွမ်းထက်ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအပြင် … Read more
အဆစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေနာတဲ့အခါ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ရေနွေးအိတ် ကပ်မလား၊ ရေခဲကပ်မလား…?
အဆစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေနာတဲ့အခါ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ရေနွေးအိတ် ကပ်မလား၊ ရေခဲကပ်မလား…? ရေနွေးအိတ် ကပ်မလား၊ ရေခဲကပ်မလား…? ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိခိုက်မိတဲ့ ဒဏ်တွေ၊ အားကစားလုပ်တာကြောင့် အဆစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေနာတဲ့အခါ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ရေနွေးအိတ် ကပ်ရမလား၊ ရေခဲဝတ်ပဲ ကပ်ရမလားဆိုပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်ဖူးကြလား။ ဒီတစ်ခါတော့ လုံးဝဇဝေဇဝါ မဖြစ်စေဖို့ ပရိသတ်ကြီးကို ရေခဲအိတ်ကပ်ရမယ့် အခြေအနေတွေနဲ့ ရေနွေးအိတ် ကပ်ရမယ့်အခြေအနေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်နော်။ ရေခဲသုံးမလား၊ ရေနွေးအိတ် ကပ်မလား အရှင်းဆုံးပြောပြရရင် နာကျင်မှုက ရောင်ရမ်းမှုနဲ့အတူ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရေနွေးအိတ် မကပ်သင့်ပါဘူး။ ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးတာက အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ရေခဲက အရောင်ကျစေနိုင်သလို အဆစ်တွေ နာကျင်မှုကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးအိတ် ကပ်တာကတော့ တစ်ရှူးတွေကို ပြေလျော့သက်သာစေနိုင်ပြီး အဆစ်တွေ နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်တဲ့နေရာကို … Read more
အရိုးကျီးပေါင်းအတွက်ဆေးနည်း အရိုးကျီးပေါင်းအတွက်ဆေးနည်းတို မင်္ဂလာပါရှင်… လက်တွေ့လေးမို့ မျှဝေပါတယ်.. အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်…. မမာရဲ့အမေက ခုထိ ဒူးနာတာ ၈ နှစ်ပါ., အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဆေးနည်းလည်းစုံနေတာပါ., ပြောသမျှ ပျောက်နိုးကောင်းနိုးရာရာ လိုက်သုံးတာလည်းကြာ ခုထိလည်းမသက်သာ… ခုတော့ ညစဉ်ဆေးစည်းပီးအိပ်တာ ၅ ရက်မှာ အတော်ကိုသိသာပြီးသက်သာလာပါတယ်.. ငွေလည်းမကုန် ဘေးထွက်လည်းမရှိတာမို့ ဘာကြောင့်နာနာစမ်းသုံးကြည့်ပါလို့… ဆေးနည်းကတော့ လက်ဘက်အသားအစို နဲ့ကျောက်ချဉ်ခဲကို ဆတူထောင်းပြီး နာနေတဲ့ဒူးဂေါင်းမှာစည်းပေးထားလိုက်ပါ… မနက်မှာ ပြန်ခွာ နောက်ညမှာစည်းအိပ်ရုံလေးပါဘဲ…. ဝေဒနာရှင်များ သက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေလို့… Ref: မြန်မာ့သတင်း ခရက်ဒစ်… အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများစုစည်းမှု့ မေတ္တာဖြင့် စိုင်း မင်း သန့် အရိုးက်ီးေပါင္းအတြက္ေဆးနည္း အရိုးက်ီးေပါင္းအတြက္ေဆးနည္းတို မဂၤလာပါရွင္… လက္ေတြ႕ေလးမို႔ မၽွေဝပါတယ္.. အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္…. မမာရဲ့အေမက ခုထိ ဒူးနာတာ ၈ ႏွစ္ပါ., … Read more
ရက်ရက်စက်စက် သိသိသာသာကို အသားဖြူ မြန်စေတဲ့ အာလူးပြုတ် အစွမ်း ထူးထူးဆန်းဆန်း မျက်နှာ ကို သိသိသာသာဖြူစေတဲ့ အာလူးပြုတ် အစွမ်း ဒီတစ်ခါတော့ စျေးကြီး နာမည်ကြီး တဲ့ အလှကုန် တွေ သုံး စရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေ ကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ် နည်းလမ်းအကြောင်းမျှ ဝေပေးပါရေ စနော် … … ။ ဒီ နည်းလမ်း လေးဟာ သင့် မျက်နှာ ကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း လို့တောင် တင်စားကြပါတယ် …. ပထမဆုံး အာလူး ကို ဆေးကြောပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ … ။ နူးသွားပြီဆိုလျှင် အခွံခွာပြီး ကောင်းစွာ … Read more
အရေးပေါ် မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းလို့ရအောင် ပြုလုပ်နည်း မိုဘိုင်းဖုန်း ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာမရှိမဖြစ်အရာတွေဖြစ်လာပါပြီ ။တောထဲတောင်ထဲ ခရီးထွက် တဲ့အခါမျိုးမှာ GPS စနစ်အသုံးပြုဖို့အတွက် မိုဘိုင်းဖုန် းဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပါ ။ Power Bank တွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် မီးလုံးဝမရတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖုန်းရော ပါဝါဘန့်ရော အားကုန် သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။AA ဓါတ်ခဲလေးတွေဟာ ကျောပိုးအိတ်ထဲအလွယ်တကူထည့်ယူသွားလို့ရတဲ့ဓါတ်ခဲလေးတွေပါ။ ဒီ AA ဓါတ်ခဲလေးတွေကိုသုံးပြီး အရေးပေါ် Power Bank လေးဘယ်လိုပြုလုပ်သွားရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။USB ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အစိမ်း ၊ အဖြူ ၊ အနီ နဲ့ အနက် ကြိုးလေးချောင်းတွေ့ပါမယ် ။ ထို့နောက် AA ဓါတ်ခဲလေးလုံးကို ဆက်ပါ ။ အပေါင်းဘက်ကို ကြိုးအနီ နဲ့ အနုတ်ဘက်ကိုကြိုးအမဲနဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ပြီးရင်တော့ ဓါတ်ခဲတွေက ကြိုးနဲ့ … Read more